Yusuf Garaad: Gobdon, Allah ha u Naxariisto
Yusuf Garaad 26 January 2016 at 08:59
Fadlan ducada, waxa aad ka taqaan Cabdi Xaaji Gobdon AUN iyo faallada qormada midkii ay kula noqoto isla boggaan ku reeb. Mahadsanid.
abdi khadar husein wasuge 26 January 2016 at 15:29
ilahey ha naxariisto cabdi xaaji eheladi & qarabdi uu ka tagayna samir & iiman ilahey ha ka siiyo
samater 26 January 2016 at 23:56
Asc innaa lillaahi wa innaa ileeyhi raajicuun,geerida ku timid walaakeey in xaaji Gobdoon marna aan uhay abti carruurtiisa ilyaas iyo daaha,halkan anoo ku hadlaya magaca reer aadan samatar uga tacsiyeeynayaa dhammaan reer Gobdoon,iyo suxufiyiinta soomaaliya iyo umadda soomaaliyeed ilaaheey samir iyo iimaan inuu NAGA siiyo asguna jannatul fardowsa wabillahi towfiiq.
samater 26 January 2016 at 23:58
Abdullahi Hussein aden 26 January 2016 at 09:17
ALLAHA u naxariisto Cabdi Xaaji Goobdoon , nin la jecel yahay ayuu ahaa runtii .
Shafie Nuralas 26 January 2016 at 09:20
ILAAH naxariistii jana hasiiyo xirfadiisa shaqo kasokow waxaan xasuustaa isaga oo marmar masjidka weyn ee xaafafa Hiliwaa khudbada jimcaha kadib wacdi kajeediya.
ILAAH ha u naxartiisto
Mahad Abdilahi 26 January 2016 at 09:22
Alle Ha u naxariisto anigu wax badan kama aqoon Gobdoon.
M. Mohamed M. Hassan 26 January 2016 at 09:31
Waa kayd qaali ah oo naga baxay. RABBI ha u naxariisto Goobadoon, kuwa isaga oo kale ahna ALLAH ha noo dhaafo.
Ebe kitaabkiisa midigta hakasiiyo Janatul Firdosana haku abaal mariyo, Shaqo wanagsan ayu umada Somaliyed usoo Qabtay. YUSUF Adigana wad ku Mahadsantahay Walaal Qaabka Qurxoon ee aad Taarikhada Marxuumka usoo Koobtay.
'Inalilah WA INA ILAHI RAJICUN,
Hassan Dahir 26 January 2016 at 09:41
Zayid Ka 26 January 2016 at 09:41
Allaha naxariis janno ka waraabiyo issaga iyo inta geerudu haleeshayba.
Garaadow markaan dhameeyay qormadan ad ku farayaraysatay waxaan is waydiiyay aqoonyahanka intaas oo xil dalka ka soo qabtay, Jalle Siyaadna sida uga garab dhawaa intaan ogahay adana ad sheegatay waxba kamuu qorin ama dhaxal galin ogaalkisii ku aadanaa tariikhda dalka oo uu u guundaloolay walibana uu ka garab dhawaa goobaha go'aanka lagu gadho, tasi marxuumka uun ma ehee waxa aan ku arkay badi wax garadka soomaalida adana kama madhnin Garaadow oo in badan ayad hagaysay idaacada umada soomaliyeed jihaynaysay tan iyo maalimkii la yagleelay, adi ayo ragii kaaga horeeyay toona dhaxal reeb idin kama ahayno.
Aaad ayad ugu mahadsantahay macluumaadka aad nala wadaagatay.
Ahmed-salad Ali 26 January 2016 at 10:01
Walaalkeen Cabdi Xaaji Maxamed Gobdon Allaah Naxariistii Jannatul Firdowsa ha ugu bishaareeyo, dembigiisana Allaha udhaafo, intii uu ka tegey oo ay ugu horreeyaan Carruurtiisa, xaaskiisa, reer Xaaji Maxamed Gobdon oo dhan, Asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan Ummadda Soomaaliyeedna Samir iyo Iimaan Allaha haka siiyo, annagana Ilaah nama fitneeyo gadaashiis. Adiga Yusuf Garaad Cumar Axmed ahna si gaar ah ayaan kuugu mahad naqayaa kuuguna tacsiyeynayaa
Maxamed 26 January 2016 at 10:19
Naxariistii janno Alle ha ka waraabiyo
Ahmed Mohamed 26 January 2016 at 10:36
Alah unaxariisto waxaa inagabaxay qof qiimo wayn ku lahaa umada Somaliyeed inaa li laahi wa inaa ilahi rajicuun
mohamed cadde 26 January 2016 at 11:04
All hownaxariisto umada somaliyed na samir iyo iman haka siiyo
Abdi M 26 January 2016 at 11:21
Ilaahay ha u naxariisto. Adiguna Yuusuf mahadsanid sida wanaagsan eed noogusoo gudbisay.
Abdulkadir Mohammed Nur 26 January 2016 at 11:25
Allaha u naxariisto Cabdi Xaaji Goobdoon, Wuxuu ahaa Ruug-Caddaa Soomaaliyeed oo Wadani ah oo hayay Xog badan..
cumar ali 26 January 2016 at 12:45
Wuxuu ahaa halyeey dalka xusi doonto taarikh dahabi ah ayuuna ka galay dalka somalia allaha u naxaristo
Hassan Abdikadir Mohamed 26 January 2016 at 13:10
Allaha u naxariisto qabrigiisana Allaha u waasiciyo. Waxaan dhihi karaa waa taariikh naga baxay mar walbana saas ayaa loo weyn wof waaya arag ah oo umadu u baahantahay ayadoon wax raad ah laga reebin
Hassan Abdikadir Mohamed 26 January 2016 at 13:11
Allaha u naxariisto qabrigiisana Allaha u waasiciyo. Waxaan dhihi karaa waa taariikh naga baxay mar walbana saas ayaa loo weyn qof waaya arag ah oo umadu u baahantahay ayadoon wax raad ah laga reebin
Hassan Abdikadir Mohamed 26 January 2016 at 13:12
Abdifatah Awaare 26 January 2016 at 13:45
aad baad u mahadsantahay Yuusuf Garaad sida wacan ee aad usoo gudbisay AHUN Gobdoon oo ahaa rug caddaa weyn oo dadka wax qora iyo warbaahintuba ay tebi doonaan, waxaan jeclaan lahaa in aad ii fasaxdo inaan Afcarabi u turjumo qormadaada anigoon xuquuqda qoraalkaaga hilmaami doonin.
Yusuf Garaad 26 January 2016 at 14:09
Abdifatah, fasax ayaad u qabtaa, waadna ku mahadsan tahay.
Abdifatah Awaare 26 January 2016 at 14:18
adiga ayaa mudan, markaan turjumo halkan ayaan kusoo falcelin doonaa si aad u indha-indhayso adiga laftigaaga Afcarabiga waxbadan baa kugu duugane.
Unknown 26 January 2016 at 20:16
Mahadsanis Yuusuf, Cabdifataax howl wanaagsan waaye hadii aad tarjuntid.
Abdifatah Awaare 27 January 2016 at 20:36
waanba dhameeyey walaal tujimaddii, Abdifatah Awaare, boggayga Facebook ayaad ka helaysaa, mahadsanid.
saleban hussein dhere 26 January 2016 at 13:53
allah haw naxaristo aamin aamin ya rabi
saleban hussein dhere 26 January 2016 at 13:54
allah ha geeyo janadda aamin
osman 26 January 2016 at 15:04
abdi ma aheen walaalkeey oo kaliya waxuu ahaa abahey oo kale waayo waxaan ka heley farxad abbo nimo allooow u naxariiso amiin
osman haji gobdon
Yusuf Garaad 26 January 2016 at 15:34
Osman -Yare, adiga iyo reer Xaaji Gobdon oo dhan waan idiinkaga tacsiyeynayaa geerida cabdi Xaaji Gobdon. Samir Allah ha idinka siiyo. Isagana Ilaaheey naxariista Janno ha ugu bishaareeyo. Nin soo kifaaxay ayuu ahaa oo ay tahay in la xuso loona dabbaal dego waxqabadkiisii maraaxiil aad u kala duwan oo uu dalku maray intuu Cabdi shaqeynayay. Nin xilligii gumeysiga shaqo billaabay ilaa haddana shaqeynaya aad ayuu u yar yahay, intaasna Dowladda uun u shaqeynaya.
Keyse Hassan 26 January 2016 at 15:29
Abdi Haji Gobdon Alle ha unaxariisto waxan ahayn daris xaafada huriwaa marka aan gurigiisa tago waxaan ku arki jiray qol xafiiskeed aad uqalabaysan sidoo kale wuxuu ahaa nin aan isla waynayn aadna ujecel dowladnimada Alle ha unaxariisto walalkeen..
YG Sxb waad ku mahadsantahay sida wanagsan eed uga faalootay.
Hada dhaw ayey ahayd markuu ka sheekeynaayey geeridii cowke maantana isagaan ka sheekeynaynaa barina waa inaka ilaahoe khaatumada noo hagaaji
Abdikadir Aqaasim 26 January 2016 at 17:07
Allaha Unaxaristo Janatul Fardowza Allaha geeyo samir iyo imaana Allaha ka siiyo Ehelkiisa iyo Soomaaliweyn oo dhan Aamiin.
Run ahaanti Adeer waxa uu kamid ahaay Rug cadayaasha diwaanka igu jiray inaan mar un la kulmo lakiin ma dhicin bahda warbahintana waxbadan oo qibrad ah waa la wadaagi jiray sida asxaab badan iga shekeeyeen Allaha Danbigiisi ha dhaafo una naxaristo Aamiin.
Yusuf Garaad Waad mahadsantahay sida aad noola wadaagtay qormadaan.
Tadamun Monitors 26 January 2016 at 18:11
ilaahay ha u naxariisto dhamantayna samir iyo maan hana ga siiyo
Abdifatah Awaare 26 January 2016 at 18:57
Yusuf halkan riix si aad u aragto maqaalkaagii oo u turjuman Afcarabi, waa mahadsantahay.
Diazi 26 January 2016 at 21:31
Waxan ku aqiinay inu ahaa nin Saciima oo furfuran, in kasto uu ahaa nin aanu si qotodheer aanu isu aqoonin dhowr jeer oo aanu wada kulanay wada hadalnay wuxu aha shaqsi dadka uu siman yihiin, qof walba sidiisa ku qadariya oo furfuran oo la sheekeysta. Alloow kuu naxariiso. Amin.
Saidm M 26 January 2016 at 23:17
Alaaha u naxariisto Cabdi Xaaji, aamiin yaa rabbi. Waxaan ku farxay in uu aabihiis ka qorey buug inkastoo aanan akhrin, waxaanse ka jeclaan lahaa in uu qoro mid ku saabsan taariikhdiisa iyo tan saxaafada soomaalida maadaama uu ka mid ahaa raga ugu waayo aragsan. Anigoo aanan marbana uga jeedin eedeyn marxuumka hadana waxaa wax laga xumaado ah in in dadka indhaha u ah ummadaan eysan intooda badan qorin buugaag ku saabsan wax qabadkooda ama taariikh ku saabsan bulshada soomaaliyeed oo ey u soo joogeen.
Siyaasiyiinta, jaamiciyiinta aqoonta xaga diinta ama maadiga, odayaasha dhaqanka, rag iyo dumar inta bulshada hogaanka u ah ama magac iyo taariikh ku dhex leh. intooda badan wey la dhintaad taariikhdooda iyo waaya aragnimadooda.
Bal fiiri madaxeyneyaashii dalka soomaray, C/llaahi Yuusuf ayaa buug qorey, intooda kale ma maqal wax ey ka qoreen taariikhdooda oo ey bulshada uga tageen. Waxaan soojeedin lahaa in mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan oo markan da'ah laga howlgalo in buug uu qoro si bulshada ugala harto waayo aragnimadiisa taariikhda siyaasada Soomaaliya ee wakhtigii tagay iyo tan maanta taagan. Buugaas oo laga yaabo in jiilalka danbe uu u noqdo jawaab iyo marqaati wixii Soomaaliya ka khaldamay iyo sababtoodii.
salah hirei 27 January 2016 at 07:41
Mahadsanid yuusuf warbixinta aad naga siisay rug cadaagii saxaafadeed cabdi xaaji goobdoon ala ha u naxariisto asaga iyo inta aad qormada ku magac dhawday dhamaan wan dhiiri gelin lahaa haduu jiro qof kale oo xog ka haya marxuumka inuu nala wadaago maadaama uu yahay nin dalka wax badan kaso qabtay luguna xasuusto nooleynta afkeena hooyo hasa yeeshee yuusuf ama qofki kale ee aqoon igu dheer waxan codsana eraygaan AUN in la i baro soo gaabinta ah
Yusuf Garaad 27 January 2016 at 11:58
Yusuf Maxamed Xayd oo ah qoraa, horena Agaasime uga soo noqday Idaacadaha Muqdisho iyo Hargeysa iyo TV-ga Qaranka ayaa bartiisa Facebook si kooban uga hadlay Cabdi Xaaji Gobdoon. Xayd wuxuu yiri: Waxaan aad iyo aad aan uga naxay geerida lama filaanka ah ee MACALLIN Cabdi Xaaji Goobdoon. Cabdi wuxu ka mid ahaa ragga fara ku tiriska ah ee dejiyay nadaamka iyo asluubta ilaa maanta warfaafinta Soomaaliyeed ku shaqayso. Wuxu ahaa ragga mideeyay siiqada af-soomaaliga ee warfaafineed ka dib markii dalku xoroobay. Wuxu ahaa nin kaftan badan oo aan calool ku sid lahayn. Gaar ahaan aniga wadashaqayn gaar ah baan na dhex martay. Waxaan hubaa in la tebidoono. Inagana samir iyo iimaan isaga janno fardowsa Alle ha ugu deeqo. Amiin.
Yusuf, waa xasuus qaaliya qoraalkani. Eebbe ha u naxariiste, Cabdi Xaaji Goobdoon wuxuu ahaa nin garasho qaran leh. Waa hubaal in la tabi kaalin muhiim ahna u baneeyay.
Ilmi Maruf 27 January 2016 at 12:43
Yusuf si wanaagsan baad uga warbixisay marxuunka AUN, abdi xaaji Goobdoon.waa taariikh ku qaaliya umada somaliyeed. Aad baad ugu mahadsan tahay.
Said Eliye 27 January 2016 at 14:02
Inaa Lilaahi wa inaa Ileyhu raajicuun .
Yusuf aad ayaad u mahadsantahay taariikhda kooban oo ad uga sheekeeysay marxuum Abdi Xaaji Goobdoon.
Wuxuu ahaa aabayaashi mediyada Soomaliyeed waana loo xiisi doonaa .
Waxuu ahaa shaqsi qaali ku ah ummada Soomaaliyeed .Ilaahoow kuu naxariiso jannatul fardowsana ilaahey ha kuu sahlo.
Mahadsanid Mudane Yusuf Graad.Saacid Celiye
Mohamed Abdulqadir Hassan 27 January 2016 at 15:57
AUN Aabe abdi haji gobdon oo ahaa aabe somalited wadani ah dareen wadaninimo ayaa igali jiray markam arko ilahay janda ha ugu bishaareyo